सरकारको शासन भाषणमै सिमित : कार्यान्वयन कहिले ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ असार ३० गते ०८:५१
सरकारले बजेट भाषण ल्याएको मिति : २०७८।२।१५ । सरकारले २०७८।७९ को बजेट भाषणमा ल्याएको महत्बपूर्ण निर्णय : २०८८ सालभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने । चाहे त्यो निजी सबारी साधन होस् चाहे त्यो सार्बजनिक सबारी साधन होस् । चाहे त्यो सरकारी गाडी होस् चाहे त्यो सँस्थाको गाडी होस् । २०८८ सालसम्म सरकारले सम्पृर्ण डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनि राजपत्रमा निकालको थियो भने रातो किताबमा छापेको थियो । नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ कुनै पनि डिजेल र पे्रट्रोलको खानी छैन् । डिजेल र पेट्रोल बाहिर राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले खाईनखाई कमाएको पैसा अरु राष्ट्रमा पुगेको छ । यदि सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो राष्ट्रको मृद्रा हाम्रो राष्ट्रमै रहन्थ्यो । २०७२।६।३ गते नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको भयो ।
नेपालको अन्तरिम सँबिधान २०७२ जारी भएको दिन भारतले आफुले मननपराएको ब्यक्ति सत्तामा आएको भनेर नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको अझै पनि अबिस्मरणाीय छ । त्यस घडीमा नेपाली जनताहरुले भोगेको सास्ती त आज पनि हाम्रो मस्तिष्कमा स्मरणाीय छ । छिमेकी राष्ट्र भनेर के गर्नु ? हामीसँग राजनितिक सम्बन्ध बिग्रियो भने नाकाबन्दी लाउन छिन् पनि लगाउदैनन् । २०७७।७८ को बजेट भाषणमा ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्र हेटौँडाको मृख्यमन्त्रीले दश बर्षभित्र सम्पूर्ण डिजेल र पे्रट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थिए । तर त्यो पनि भाषणमै सिमित हृन्छ जस्तो छ । किनभने यो निति ल्याउनको लागि बाग्मती प्रदेशले कुनै पनि परियोजना बनाएको जस्तो देखिदैन ।
मैले सृने र बुझेअनुसार नेपालमा केही बर्षअगाडि सृर्यबिनायकबाट त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रलीबस सञ्चालनमा थियो रे । तर यातायात ब्यबसायको दबाबमा आएर सरकारले ति ट्र्लीबस पनि बिस्थापन गराइदिए । अहिले ७ बटै प्रदेशको यातायात डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनहरु चाहे त्यो दृई, चार, छ पाडग्रे होस् दिनमा हजारौको सँख्यामा दर्ता भइरहेका छन । गाडी बेच्ने अटोशोरुमहरुले पनि एउटा गाडीमा दूईदेखि दशलाख रुपिँया नाफा राखेर गाडी बेचिराखेको छन् । किलोको कौडीमा नबिक्ने फलामलाई लाखौँमा बिक्री गरि त्यो पैसा बिदेशमा लगेको सरकार देख्दैन ।
यातायात ब्यबस्था बिभाग र यातायात कार्यालयले जनतालाई नयाँ गाडी नकिन्नु र नयाँ गाडी दर्ता नगर्नु भनि यातायात मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाएको छैन् । जसको कारण नँया गाडी किन्ने गाडी धनिहरुलाई घाटा लाग्ने धैरै सम्भाबना छ । सरकारले दश बर्षपछि बिस्थापना गर्ने भनेको गाडीहरु अटोशोरुमबाट अझै बिक्री भइरहेको छ । सरकारले बिधुतबाट चल्ने सबारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा ३५ लाख डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन छन् । यी सार्बजनिक सबारी साधनमा दैनिक खर्बौंको डिजेल र पेट्रोलको उपयोग हुन्छ । हिसाब गर्ने हो भने दैनिक कत्ति नेपाली पैसा बाहिर जान्छ । अटोशोरुमहरुले बीस बटा गाडीको भन्सार तिर्ने र सय बटा गाडी भित्राउने गरेका छन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँदैन । त्यत्तिमात्र नभएर अटोशोरुमहरुले गाडी बेचे बापत आएको नाफाको पनि कर राज्यलाई तिदैनन् । गाडी बेच्ने कम्पनिहरुले सरकारलाई अडिट गरेको हिसाबकिताब पनि देखाउदैनन् । सरकारले गाडी बेचेबापत २० प्रतिशत मात्र नाफा राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । २ लाखमा किनेको गाडीको २० प्रतिशत २ लाख २० हजार हुन्छ तर गाडी बेच्ने कम्पनीले ४ लाखमा बेचिरहेका छन् । गाडी दर्ता गर्ने बेलामै ढड्डामा त्यस गाडीको चल्ने अबधि लेख्नुपर्छ ।
२०७१।१।१ गते यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यबस्था बिभागले निजी बा भाडाको गाडीको चल्ने अबधि बिलबुकमा लेख्ने परिपत्र पनि यातायात ब्यबसायको दबाबमा सरकारले दराजमा थन्काइदियो । २०७१।५।२६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गप्यो । २०७१।११।१८ गते यो निणैय कार्यान्वयन गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालिएको थियो । २०७२।१२।१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३।१२।१७ गतेसम्म उपत्यकाका सम्पूर्ण २० बर्षे पूराना गाडी बिस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । २०७४।१२।१ मा त्यतिखेर २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन गरेपनि त्योभन्दा पछि २० बर्षे पृराना गाडी बिस्थापन भएको छैन् । २० बर्षे पुराना गाडी बिस्थापन नगर्दा प्रदुषण र ट्रफिक जाम बढ्न गएको छ । २०४३ सालमा डिजेल र पे्रट्रेलबाट चल्ने बिक्रम टयाम्पु दर्ता भएको थिए । २०४८ सालमा बिक्रम टयाम्पु दर्ता बन्द भयो । २०४३ सालमा डेढ लाख किनेको बिक्रम टयाम्पुले एकदिनमा ३०००।३५०० कमाउथ्योँ । यो टयाम्पु उपत्यकाको बिभिन्न सडकमा चल्थ्यो । तर डिजेलबाट चल्ने टयाम्पुले धेरै प्रदुषण गर्यो भनेर कुपण्डोल र डिल्लीबजारको बासिन्दा यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकमा उत्रिए । २०५६।५।५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट बिक्रम टयाम्पुलाई बिस्थापन गर्ने र लुम्बिनी र गण्डकीबाट अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो । त्यत्तिखेर हाम्रो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चालिस लाख पर्ने माइकोबस भन्सार र भ्याट छुट दिएर बीस लाखमा टयाम्पु साहुलाई हस्तान्तरण गरे । त्यतिखेर बीस लाखमा किनेको माइकोबसले करोडौँ कमाइसक्यो । अहिले पनि बीस बर्ष पृरानो नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी सटटाभरना गर्न पाउनुपर्छ भनि यातायात ब्यबसायहरु दैनिक यातायात मन्त्रालय धाइरहेको छन् । तर यसो गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा सम्भब हुदैन । एउटै ब्यबसायहरुले पहिलै ३४ बर्ष ब्यबसाय गरिसके । अब पनि २० बर्ष ब्यबसाय गर्न दिने हो भने एउटै ब्यबसायले ५४ बर्ष ब्यबसाय गर्छन् ।
बिज्ञहरुको भनाइअनुसार नेपालको चालिस प्रतिशत प्रदृषण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनको धुँवाको कारणले गर्दा हुन्छ । डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधनबाट निस्केको धुँबाको कारणले गर्दा मानिसहरुको आँखा दृख्ने, श्बासप्रश्बासमा समस्या, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरु लाग्न सक्छन् । साथै धुँबाको कारणले गर्दा उब्जनीमा कमि आउने र बायुमण्डलमा रहेको ओजोन तह पनि टालिने डर हुन्छ । त्यसैले सरकारले जत्तिसक्दो चाँडो सम्पूर्ण डिजेल र पे्रट्रोलबाट चल्ने सार्बजनिक सबारी साधन बिस्थापन गरि बिधृतबाट चल्ने सबारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । बिधुतबाट चल्ने सबारी साधनहरु डिजेल र पे्रट्रोलबाट सबारी साधनहरु भन्दा कम रेटमा सञ्चालनमा आउथेँ । डिजेल र पे्रट्रेलबाट सञ्चालनमा आएका सबारीहरुको हालको लागि जाचँपास, नबकिरण, रोडपरमिट बन्द गर्न जरुरी छ । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । बिद्युत उत्पादन हाम्रै राष्ट्रमा सम्भाब्य छ । यदि बिधुतबाट चल्ने गाडी छिटो सञ्चालनमा ल्याउने हो भने राज्यलाई पनि राजस्ब आउँथ्यो भने प्रदुषण पनि कम हुन्थ्यो ।
हरिया डाँडाकाँडाहरु उत्तर तिर देखिने सेतो सौन्दर्य हिमशृङ्खला हरु स्वच्छ बाताबरण, टाढाटाढाबाट देखिने विभिन्न सौन्दर्य ठाउँहरु ती खेतका विशाल फाँटहरु त्यसैमा फलेर झुलेका ती धानका सुन जस्ता बाला हरु सग फोटो खिचुखिचु लाग्ने । बारिका ती पाटाहरुर फलफुलका ती सुन्दरबगैँचाहरु कहि खरबारी रकहिँ विशाल जङ्गल हरु, चराचुरुङ्गी हरुको आगमन र त्यो रमाइलो अनुभूति र घर पालुवा गाइबस्तुहरु यी विभिन्न कारणले गर्दा गाउँमा धेरै कुरा हुने हुनाले पनि गाउँनै धेरै राम्रो लाग्छ । यो संसार नै फरक जस्तो लाग्छ । मान्छे थरी थरिका हुन्छ्न कुनलाइ सहरको माया र कुनैलाई गाउँको माया हुन्छ। त्यो मान्छे मलाई गाउकै मान्छे भएरकी जुनसमयमा पनि याद अनि संम्झना हुन्छ।गाउँको हरेक कुरा रमाइलो पाइन्छ ।